Magacaabidda: Habayn iyo Otamaatig ah u samaynta Jadwalka Ballanta Isticmaalka Awood Iibka | Martech Zone
Magacaabid: Habayn iyo Otamaatig ah u samaynta Jadwalka Ballanta Isticmaalka Iibka
Isniin, Maarso 21, 2022 Isniin, Maarso 21, 2022 Douglas Karr
Mid ka mid ah macaamiisheena ayaa ku jira warshadaha daryeelka caafimaadka oo na codsaday xisaabi isticmaalkooda Salesforce iyo sidoo kale in ay bixiyaan tababaro iyo maamul si ay u kordhiyaan soo laabashadooda maalgashiga. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ka faa'iidaysiga madal sida Salesforce waa taageeradeeda cajiibka ah ee is dhexgalka dhinac saddexaad iyo isdhexgalka wax soo saarka iyada oo loo marayo suuqa app-keeda, AppExchange.
Mid ka mid ah isbeddellada habdhaqanka ee muhiimka ah ee ka dhacay safarka iibsadaha online waa awooda is-adeegga. Iibsad ahaan, waxaan rabaa in aan cilmi baaris ku sameeyo dhibaatooyinka online, aqoonsado xalalka, qiimeeyaan iibiyaha, iyo… ugu dambeyntii… hel ilaa xadka dhamaadka inta aan awoodo ka hor inta uusan qof kasta la xiriirin qof wax iibinaya.
Jadwalka Ballanta Toos ah
Dhammaanteen waxaan ku soo marnay jadwalka jahannamada… ka shaqeynta dib iyo hor inta u dhaxaysa dhammaan go'aamiyeyaasha muhiimka ah ee iimaylka ah si ay isugu dayaan in ay helaan waqti ku habboon oo lagu xiro oo la kulmo. Waan quudhsadaa nidaamkan… waxaanan galinay jadwal si toos ah ballanta rajadayada iyo macaamiisheena si ay nala kulmaan.
Jadwalka ballanta is-adeegga tooska ah, waa hab cajiib ah oo lagu kordhinayo jadwalka ballanta kooxdaada iibka. Goobahani waxay isbarbardhigaan jadwaladaha waxayna helayaan waqti ay wadaagaan dhinacyada, xitaa kooxaha oo dhan. Laakiin maxaa dhacaya haddii ururkaagu uu isticmaalayo Salesforce oo uu u baahan yahay hawshaas lagu duubay Sales Cloud?
Magacaabid waxay samaysaa ballamo adag oo dejinaya neecaw leh, xal dabacsanaan leh oo 100% ay ku shaqeeyaan Salesforce. Si otomaatig ah u samee hababka gacanta oo daawo shaqadaada oo bilaabeysa inay socoto! Magacaabis waa a Salesforce app taas oo macnaheedu yahay inaad si fudud uga soo dejisanayso AppExchange oo aad bilowdo - is-dhexgalka looma baahna!
Adigoo isticmaalaya Appointiv, waxaad u oggolaan kartaa macaamiishaada inay ballansadaan oo ay maamulaan ballammadooda sababtoo ah dhammaan helitaanka kooxdaada waxaa lagu cusboonaysiiyaa Salesforce waqtiga dhabta ah iyada oo aan loo eegin jadwalka ay isticmaalaan. Appointiv wuxuu bixiyaa jadwal aan dhib lahayn oo xattaa qaabila xubno badan oo kooxeed oo leh jadwalyo iyo jadwalyo kala duwan.
Dejintu waa sahlan tahay, ku daraya foom mareeg ah iyo habaynta summayntaada iyada oo loo marayo Apppointiv app:
Qiimaynta Appointiv waxay ku salaysan tahay isticmaale kasta… oo waxaad xitaa ku dari kartaa martigeliyayaasha shirarka dibadda ee aan haysan shatiga Salesforce qiimo jaban. Sicirka daah-furnaanta sidoo kale waxaa loola jeedaa:
Looma baahna shatiyo dheeri ah isticmaalayaashaada khibrada Salesforce (Community).
Looma baahna shatiga Salesforce dheeraadka ah ee gelitaanka API ee Salesforce Professional Edition orgs.
Looma baahna shatiyo Salesforce dheeraad ah si loo dejiyo kuwa aan iibka ahayn martigeliyahaaga.
Appointiv waligiis ma kaydiyo xogta macmiilka meel ka baxsan tusaale ahaan Salesforce… marka ma jiraan wax walaac ah oo ku saabsan arimaha sharciyeynta iyo goobaha cid saddexaad oo laga yaabo inay dheefshiidaan ama u gudbiyaan xogta gadaal iyo gadaal.
Bilow Tijaabada Bilaashka ah ee Appointiv
Shaacinta: Waxaan ahay lammaane Highbridge laakiin wax xidhiidh ah lama laha Appointiv.
Tags: isweydaarsigamagacaabidjadwalka ballantaisdhexgalka jadwalkabalamaha iibkadaruuraha iibkaiibiniibinta iibsigajadwalka ballanka iibkasaleforce isdhexgalkabalamaha webka